Amadama aphinda avulwa ngomthamo wama-20%.
Ichibi elingenasiphelo elinombono wolwandle, ibha emanzi, ichibi labantwana, i-sauna, ibala lentenetya, ibala lebhola ekhatywayo, indawo yokuzivocavoca, itafile yentenetya, indawo yokutyela (iimpelaveki ezivulwa kuphela).
4.89 · Izimvo eziyi-94
Ndiyafumaneka 24/7 ukuphendula imibuzo yakho ngefowuni.
*UMthintelo we-COVID WAMHLANJE*
I-COMPLEX INAMAchibi KUNYE NEMIDLALO YEMIDLA AVALIWE - I-Spa kunye ne-Gym zivulwa (intlawulo eyongezelelweyo yokusetyenziswa koSuku) - UKUSETYENZISWA KWEMASKHI KUNYANZELEKILE KWIINDAWO ZIKARHULUMENTE.
I-COMPLEX INAMAchibi KUNYE NEMIDLALO YEMIDLA AVALIWE - I-Spa kunye ne-Gym zivulwa…